Mac ruru 9,2% n'ụwa nile dị ka kọmputa kachasị eji na kọmputa | Esi m mac
Macs na-anọchi anya 9,2% nke kọmputa ndị kachasị eji na weebụ
N'ime ọnwa nke Eprel, Apple jisiri ike nweta oke kachasị nke ojiji nke sistemụ arụmọrụ ya na kọmpụta nkeonwe iji chọgharịa na weebụ dịka akụrụngwa Net Ngwa na Sọnde gara aga. Sistemụ arụmọrụ Mac ọnụ gụrụ 9,2% nke kọmpụta nkeonwe na ntanetị n'ọnwa gara aga, mmụba nke ihe karịrị otu percent. ọ bụrụ na anyị arapara na 7,8% na ọ nwetara na Machị.
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụghị ihe dị ịtụnanya, ebe ọ bụ na ọnụọgụ nke kọmputa Mac ndị a na-eji agagharị na weebụ na-arịwanye elu ọtụtụ afọ, itinye ihe ndekọ gara aga na 8% nke enwetara n'oge ọnwa nke Ọktoba 2015 na ihe dịka otu afọ gara aga, n'April nke afọ gara aga, òkè ahụ adịlarị 7,4%, mgbe niile ma ọ bụrụ na anyị agbadoro data nke ụlọ ọrụ a nyere.
Ihe data enyere na ojiji nke weebụ site na ụdị akụrụngwa site na Net Net malitere na November 2007, mgbe Windows nwere ahịa 95,9% na Mac ruru naanị 3,4%.
N'aka nke ọzọ, Microsoft ahụla na ọ na-achịkwa PC ahịa ka ọ belata Apple, dịka ọmụmaatụ òkè ya na ahịa PC. dara n'okpuru 90% na nke mbu na onwa gara aga. Windows weere 89,2% nke kọmpụta na inntanetị na Eprel, gbadata na 90,5% na Machị, dị ka ekwenye na ngwa Net. Otú ọ dị, mbipute nke OS X 10.11 akpọrọ El Capitan, nwetara 4% nke iji PC eme ihe n'ịntanetị na Eprel.
Ka o sina dị, na Tuesday nke izu gara aga, Apple kwadoro nke ahụ Mac kọmputa ahịa ha dara 12% kwa afọ na nkeji iri na ise nke March. Ọ bụ nke ugboro abụọ ke akpatre 28 ebe na Macs enwebeghị ike karie uto nke PC PC uwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Macs na-anọchi anya 9,2% nke kọmputa ndị kachasị eji na weebụ
Tim Cook na Apple Watch, China, na More na CNBC si Mad Money Show
Fitbit CEO kwenyere na Apple duhiere echiche Apple Watch